Wararka Maanta: Arbaco, Nov 28, 2012-Dagaal culus oo Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab ku dhexmaray Duleedka Degmada Balad-Xaawo
Dagaalkan oo socday muddo saacad ku dhow ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba ka mid ah dhinacyadii dagaalku u dhexeeyay, halka ay ku dhaawcmeen tiro intaas ka badan, iyadoo dagaalku uu si iskiis ah u joogsaday.
"Kooxo ka tirsan Al-shabaab oo isku urursanayay duleedka degmada ayay ciidanka dowladdu weerar ku qaadeen wayna kala eryeen, xaaladduna waa mid deggen," ayuu yiri Diyaad Cabdi Kaliil oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka Gedo.
Sarkaalku wuxuu intaas ku daray in ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay, inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego khasaaraha ka dhashay dagaalka, balse dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen maydadka labo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay.
Xarakada Al-shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalka, balse dadka ku sugan gudaha degmada Baladxaawo ayaa soo sheegaya inay arkeen dhaawacyada askar ka tirsan dowladda oo degmadaas la geeyay, xaaladduna ay hadda tahay mid deggen.
Dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor ay degmadaas muddo kooban la wareegeen xoogagga Al-shabaab kaddib markii ay weerar gaadmo ah ku qaadeen, waxaana degmadan oo xadka Kenya iyo Soomaaliya ku taalla ay dhowr jeer kala qabsaday dhinacyada dagaalamaya.